Ungandibatsira here nekodzero yechinyorwa chekushandisa kuAmerica listing optimization?
Kuva nekadhi yakanaka peji yakanyatsogadziriswa ecommerce SEO uye yakakonzerwa nekanyatsogadzirwa keyword tool yeAmazon inoreva kuti unogona kukwezva zvakanyanya kubva kune vanotengesa vachitsvaka zvinhu zvakatengeswa pamusoro apo. Zvakanaka, kuti uchinje chikamu chechimbichi chevaya ava vasati vashandurwa nevatengi kune vatengi chaivo vanotenga newe. Uye kuisa sarudzo yakagadzirirwa yakakosha yezvinyorwa zvinyorwa munzvimbo yakakodzera ichakubatsira iwe. Zvechokwadi, hapana ruzivo rwekutsvaga rwaizokwanisa kutyaira doro rako-kutumira doro kusvika pakubudirira kwekupedzisira, pamwe chete. Uye hazvina mhosva kuti zvakanyatsotarisirwa sei zvinogona kuva. Ndinoreva kuti kuti uve mutengesi chaiyo kuAmazon, pane zvimwe zvinhu zvakakosha zvinoramba zvichiongororwa, kuchinjwa, nekufungidzirwa kakawanda.
Kuti tisareva zvakawanda zvakadai seimwe nzvimbo inowanikwa yebato-uye-yematengesi, nzvimbo ino yekutengesa ecommerce inotarirwa kunyanya nemitambo yekukwikwidzana, pamwe chete nechiremera chemunhu mumwe chete uye kuvimbika. Kunyange zvakadaro, nekugadziriswa kwakanyatsoshandiswa kutsvakurudza niche uchishandisa yakanaka keyword tool kuAsia, unogona kuita kuti zvinhu zvive nyore. Mushure mezvose, zvichida ndiyo chete nzira yakaratidza nzira yekugadzirisa kuenderera mberi kwevashandi vari kurarama vachikushanyira nguva dzose kana vachida zvimwe zvezvinhu zvamunazvo. Saka, pasi apa pane zvingasarudzwa zvakanaka zvekuti iwe uzvisarudzire iwe pachako keyd keyword tool kuAmazambique uye dombo iro rakazara pamusika nemuzvigadzirwa zvako zvakarongedzwa pamusoro pekutsvaga kwezvakagadzirwa pamusoro apo.
Mubatsiri wekutanga paIndaneti ndingakukurudzirai nhasi iShoko Key Tool Dominator. Pakati pemakona ayo akasimba, kune imwe yakasiyana inobound keyword suggestion service iyo inogona kukupa mufananidzo mukuru wezvose zvakakosha mazwi uye mitsara yekutsvaga mutsva yekushandiswa inoshandiswa nevatengi vanogara kuAmazon. Nenzira iyo, iwe uchagara uchikwanisa kuita zvakasimba, nguva dzose uchigara wakagadzirira kushandisa mazano ekutsvaga kutsvaga mukuwana mukuzivikanwa kusvika ikozvino uye zvinotarisirwa kuve kunyanya kufanana nenguva. Nehurukuro inokosha inowanikwa mukusvikirika kwaunokwanisa iwe unogona kumhanya kusvika kumatatu emibvunzo yakakosha yezuva rimwe nerimwe yakagadzirirwa. Uye iwe unogona kunge uchibhadhara pakarepo mashekeri makumi matanhatu nemasere kuti unakidzwe nehupenyu hune huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwei software software.
Ndiyo imwe nyanzvi yakakosha yekushandisa Amazon, iyo inonyanya kubatsira kana ichibvisa kushandiswa kwemashoko ose asina kunaka kana kutsvaga mutsvuku mitsara - inenge pasina nguva. Scientific Seller isiri yekushandisa paIndaneti yekutsigira mazita enyu mazita pa Amazon ane ruzivo rwekukwikwidza kunzwisisa uye ruzivo rwekukosha mazwi mazano anongogadzirira chete chinhu chako kana chigadzirwa. Cherechedza, zvisinei, kuti kuita zvakawanda kunze kweScientific Seller Ndinokurudzira zvakasimba kuti uri kuitamba ichienderana neGoogle's Keyword Planner. Nenzira iyo, iwe uchadzivisa chero matambudziko, akadai pasina huwandu hunokosha hunobatanidza nemashoko ekutsvaga kana kuti misoro yakareba yekutsvaga mhinduro inoita seyo yakaiswa zvisina kururama Source .